भारतीय पाइलटका छोरालाई भावुक पत्र–घृणा शक्तिशाली हुन्छ कि माया? [पत्रसहित] « Postpati – News For All
भारतीय पाइलटका छोरालाई भावुक पत्र–घृणा शक्तिशाली हुन्छ कि माया? [पत्रसहित]
फागुन १७, काठमाडाैं । पाकिस्तानी सेनाको कब्जामा परेका भारतीय वायु सेनाका पाइलट अभिनन्दन वर्तमान आज रिहा हुँदै छन्।
उनलाई अपराह्न दुवै देशका पन्जाब राज्यको वाघा सीमामा भारतलाई हस्तान्तरण गरिने तयारी गरिएको छ।
गत बुधबार भारत र पाकिस्तानबीच भएको हवाई आक्रमणमा भारतीय वायुसेनाका अभिनन्दन वर्तमानलाई पाकिस्तानले समातेको थियो।
त्यसको भोलीपल्टै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले ‘शान्तिको संकेत’का रूपमा अभिन्दन फिर्ता गर्ने घोषणा पाकिस्तानी संसद्‍मा गरेका थिए।
कब्जामा रहेका अभिन्दनलाई पाकिस्तानले फिर्ता गर्ने भएपछि भारतभर हर्ष छाएको छ भने उदराता देखाएको भन्दै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको प्रसंसा भइरहेको छ।
पाकिस्तानी सेनाको कब्जामा परेपछि पाइलट अभिनन्दन चर्चामा रहेका छन्।
उनै अभिन्दन रिहाइ हुनुअघि अघिल्लो दिन सैन्य मामिला सम्बन्धी समाचार साइट ‘पाक आर्म्ड फोर्स’मा उनका छोरालाई सम्बोधन गरिएको एउटा भावुक पत्र प्रकाशित गरिएको छ।
उक्त पत्रमा ‘उपहारको रुपमा अभिनन्दनलाई फिर्ता गराउन लागिएको’ भन्दै उनलाई केही प्रश्न पनि सोधिएको छ।
श्रमती, छोरासहित अभिनन्दन रहेको तस्बिर राखिएको पत्रमा सोधिएको छ–घृणा शक्तिशाली हुन्छ कि माया?
￼लेखिएको पत्र यस्तो छ ः
बधाई छ, तिमी चाँडै आफ्नो बुवालाई अंगाल्न गइरहेका छौ । हामी तिम्रो बुवालाई एउटा उपहारको रुपमा फिर्ता पठाइरहेका छौं । चाहे उनी तिमी जस्ता थुप्रैमाथि बम खसाल्न आएका किन नहुन् । बाबु सुन । मेरो तिमीलाई एउटा अनुरोध छ ।
जब उनले तिमीलाई हतारिँदै आफ्नो कसिलो अंगालोमा बाँध्छन्, उनलाई बिनम्रताका साथ मेरो तर्फबाट केही प्रश्नहरु सोध्नु । उनलाई सोध्नु, बुवा ! के मजस्ता काश्मिरी बच्चाहरुलाई खुशीसँग उनीहरुको बुवासित बस्ने अधिकार छैन ? उनलाई सोध्नु, यदि उनीहरुले तपाईंलाई अराजक भीडको बीचमै छोडिदिएको भए के हुन्थ्यो ? उनलाई सोध्नु, युद्ध र घृणाको मूल्य के हुन्छ ? उनलाई सोध्नु, के शक्तिशाली छ घृणा कि माया ? उनलाई सोध्नु, जीवन सुन्दर छ वा मृत्यु ? म तिम्रो उत्तरको प्रतिक्षामा हुनेछु ।
खुशीसाथ रहनु सानो बाबु, एक दिन तिमी आफ्नो बाबुसहित हामीसित भेट्न आउने कामना गर्छु । तर, त्यतिबेला तिम्रो बाबुको हातमा मिसाइल र बम होइन फूल हुनेछ । अन्त्यमा, म तिमीलाई वचन दिन्छु कि कसैले पनि तिम्रो अनुहारको मुस्कान खोस्न सक्ने छैन र हाम्रो विध्वंसका लागि हाम्रो भूमि प्रयोग हुन दिने छैन । आफ्नो बाबुसँग खुशीसाथ रहनु ।